M nwere mmekọahụ ruo ihe karịrị 10 afọ - News Ọchịchị
M nwere mmekọahụ ruo ihe karịrị 10 afọ
Isiokwu a na-akpọ “M nwere mmekọahụ ruo ihe karịrị 10 afọ” e dere site Pamela Stephenson Connolly, n'ihi na The Guardian on Monday 21 December 2015 08.00 UTC
Na na na a 46-afọ nwanyị na-adịghị nwere mmekọahụ ruo ihe karịrị 10 afọ. Nke a bụ mgbe ndị plan, kama m na na araparawo a ebighi-ebi gburugburu: M na-echegbu onwe ya mere ọtụtụ ihe banyere otú m nwere ike ịkọwara a nwere onye na ogologo ya na-aga, ka njọ ọ na-akawanye. Achọghị m ka m na-ebi ndụ na ike nke ndụ m enweghị mmekọahụ na mmetụta ịhụnanya.
N'ịbụ theoretically njikere jikọọ mmekọahụ mmadụ na onye ọzọ bụ ezi nzọụkwụ mbụ. Ị ga-aga kute ize ndụ, ezie na, na e nwere obere agbachitere maka onye ọ bụla megide erughị ala na embarrassments, n'agbanyeghị otú mmekọahụ ahụmahụ ha nwere ike ịbụ. N'ezie, ghere oghe ka jụrụ ajụ - ọbụna ịkwa emo - bụ akụkụ dị mkpa nke ọrụ gị n'ihu. Mgbe ahụ erughị ala emee, dị nnọọ ịgwa onwe gị na-eku ume ma dịrị ya.
Maka ugbu a, -agbalị ikpe banyere-eme na njikọ na ndị ọzọ nanị n'ihi na fun na ọbụbụenyi. Ọ bụrụ na gị ka onwe gị ghọọ ndị ọzọ omume enyi ha, Mee elu mee ala ị ga-ndammana izute onye i ga-dọtara. N'oge ahụ, ị ga-n'ezie na-ahapụ gị nkasi obi mpaghara na-ekwe ka ọchịchọ gị na-edu otú.
-Ibe na-ejikwu obiọma ahụ gị site ugbu a, ma nakwere echiche ahụ kwesịrị ka i nwere obi ụtọ. Ọ bụla otu mmadụ nwere ike ịdị mma ka onye ọzọ. Na echegbula banyere nwere mmekọ 'ọjọọ a na-banyere gị ogologo oge alughi di: ị na-adịghị na-agwa ha, ma, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eme, ọtụtụ ndị ikom ga-iche na i nwere ụkpụrụ dị elu.
• Pamela Stephenson Connolly bụ a US dabeere na ụlọakwụkwọ ọkachamara na mmekọahụ anaghị ekwe.
• Ọ bụrụ na ị ga-achọ ndụmọdụ site n'aka Pamela Stephenson Connolly banyere mmekọahụ anya, -eziga anyị obere nkọwa nke gị nsogbu n'obi na- private.lives@theguardian.com (biko izipu Mgbakwụnye). kwa izu, Pamela ahọrọ otu nsogbu zaa, nke ga-bipụtara online na-ebipụtakwa. Ọ akwa ụta na ọ pụrụ ịbanye ozi ndị o.
← Ga-amasị Gị Pee Na Your Socks Iji Chajịa ekwentị? Great isi adịghị eme ya niile na ha onwe ha →